Italy: Nin Qori been ah sitay oo argagaxiyey shacabka magaalada Roma [Sawiro] - iftineducation.com
Italy: Nin Qori been ah sitay oo argagaxiyey shacabka magaalada Roma [Sawiro]
aadan21 / January 26, 2016
iftineducation.com – Habeenimadii Xalay (Isniin) ayey ciidamada amaanka ee magaalada Roma gebi ahaan xireen xarunta ugu weyn ee Tareenada laga raaco kadib markii halkaasi lagu arkay nin hubeysan, arrintaasi oo argagax gelisay shacabkii goobtaasi ku sugnaa.
Ciidamada amaanka ayaa baaritaano badan ka sameeyey xaruntaasi Tareenada iyagoo qeybo kamid ah dukkanada iyo weliba goobaha tareenada laga raaco xiray.
Muddo dheer ayey ku qaadatay ciidamada inay soo qabtaan ninkan la sheegay inuu hubeynaa oo uu sitay Qori, sida ay sheegeen dadka goob joogayaasha ah.
Ninkan ayaa markii danbe la ogaaday inuu xaruntaasi Tareen ka raacay, waxaana laga soo dhex qabtay tareenkii uu saarnaa xili uu marayey meel 50km u jirta duleedka magaalada Roma ee caasimada Talyaaniga.
Booliiska ayaa markii danbe sheegay in ninkan qoriga uu sitay uu ahaa mid been ah ee nooca caruurta ku ciyaarto, isla markaana uu sheegay inuu had-yad ahaan ugu siday wiilkiisa. Ciidamada amaanka ayaa sheegay in ninkan uu hayo xanuunka dhimirka, waa siday hadalka u dhigeenee.
Italy Xarunta Tarenada Roma
Dhacdadan ayaa kusoo beegantay xili dalalka Yurub ay heegan sare ku jiraan tan iyo weerarkii ka dhacay magaalada Paris bishii November ee lasoo dhaafay.
Bishii December ayey booliiska Talyaaniga ay sheegeen inay wadankaasi ku qabteen xubno ka tirsan ama taageera kooxda Daacish.
Yasmin waxay dumarka ku leedahay nimankiina dareenka u muujiya
CIIDANKII KENYA EE ISAGA BAXAY BADHAADHE IYO CEELCADDE OO XUDUUDA LAGU WEERARAY